Ankafizo ny Buda Castle | Vaovao momba ny dia
Ankafizo ny Buda Castle
Susana Garcia | | Budapest, General, Hongria
La fitsidihana ny tanànan'i Budapest Izy io dia misy dia an-tongotra mandehandeha any amin'ny Buda Castle, fantatra ihany koa amin'ny hoe Buda Palace na Royal Castle. Ity lapa tsara tarehy ity izay miakatra ambonin'ny tanàna dia manana ny tantarany ary naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Andao hojerentsika ny pitsopitsony rehetra momba izany tranobe ity sy ny zorony, amin'ny zavatra rehetra tokony ho fantatsika alohan'ny hamangiana azy. Hotsaroantsika ihany koa ny sasany amin'ireo teboka mahaliana ny tanànan'i Budapest, izay tsy mifantoka amin'ny tranony fotsiny.
1 Tantaran'ny Buda Castle
2 Ahoana ny fomba hahatongavana any amin'ny trano mimanda
3 Fitsidihana ny Castle
4 Maze Buddha
5 Ny distrikan'i Buda
Tantaran'ny Buda Castle
Ny toerana misy ny tanànan'i Budapest ankehitriny dia nisy tanàna romana ary avy eo dia nonenan'i Huns, Avars ary Hongroà taty aoriana. Ny fametrahana an'i Buda eo akaikin'ny Danube dia nitombo ny lanjany, antony nanatanterahana ny fananganana lapa. Ny lapa ankehitriny dia nanomboka naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX teo amin'ny havoana, ao tara fomba Gothic. Taty aoriana, namboarina tamin'ny taonjato faha-1987 tamin'ny faran'ny fomba Baroque izy io. Nandritra ny fahirano an'i Budapest tamin'ny Ady lehibe II dia rava tanteraka ny trano mimanda, izay nanjary fanarenana vaovao, tamin'ity indray mitoraka ity tamin'ny fomba neoklassical. Tamin'ny XNUMX ny lapa dia nanjary ampahany tamin'ny UNESCO World Heritage Site.
Ahoana ny fomba hahatongavana any amin'ny trano mimanda
Mba hahatongavana any dia mora be amintsika, indrindra satria io trano io dia azo jerena amin'ny teboka maro, satria eo an-tampon'ny havoana manjaka tanàna no misy azy. Mila miampita ilay Chain Bridge fantatra fotsiny ianao ary miakatra ny tehezan-tendrombohitra izay manomboka eo akaikin'ny tionelina. Raha tsy te hanao ny dia an-tongotra isika satria be dia be ny fiakarana dia afaka mankafy ny mahafinaritra indrindra. Ny tsara indrindra dia ny mividy ny tapakila mandroso sy miverina amin'ny finday satria tsara vidy kokoa.
Fitsidihana ny Castle
Amin'izao fotoana izao ny tranon'ny lapa dia misy andrim-panjakana sasany ary mandritra ny fitsidihana dia afaka mahita ny sasany amin'izy ireo ianao. ny Tranombakoky ny Tantara Budapest Ao anatin'ny trano mimanda izy io ary milaza ny tantaran'ny tanàna hatramin'ny Moyen-Orient ka hatramin'izao. Manana rihana efatra ny tranombakoka ary manana fiainana andavanandro amin'ny vanim-potoana samihafa. Ny iray amin'ireo faritra mahaliana indrindra amin'ny tranombakoka dia ny lakaly any ambanin'ny tany.
La Galerie nasionaly hongroà ao anatin'ny trano mimanda koa io. Afaka jerena ao ny sangan'asa kanto hongroà nanomboka tamin'ny Moyen-Orient ka mandraka ankehitriny. Saika ny tranombakoka iray manontolo dia natokana hoso-doko, saingy azo atao ihany koa ny mahita sary sokitra sy alitara vitsivitsy hatramin'ny faran'ny vanim-potoana Gothic.
Ny fitsidihana iray hafa tokony hatao ao amin'ny trano mimanda dia ny Tranombokim-pirenena Széchenyi. Tokony holazaina fa ny fitsidihana ny trano famakiam-boky dia tsy maintsy apetraka mialoha amin'ny alàlan'ny finday, na dia tsara aza fa maimaim-poana ny fidirana.
Ny Labyrintin'i Buddha dia tsy ambanin'ny trano mimanda, fa eo akaikin'ny Bastion sy ny Fiangonan'i San Matías izy io. Ity maze ity dia a tamba-jotra misy lava-bato sy tionelina voajanahary izay noforonina tamin'ny asan'ny rano ambanin'ny tany nandritra ny taonjato maro. Ao anatin'izy ireo dia afaka mankafy fitsangatsanganana an-tsehatra ianao, fisehoan-javatra ary koa kafe. Azonao atao ny mitsidika kilometatra iray mahery amin'ireo galeriany. Azo atao ny misafidy ny fitsangatsanganana ankapobeny ary azonao atao ihany koa ny mitsidika irery na tsiroaroa, miaraka amin'ny pas manokana.
Amin'ny Internet dia afaka mianatra zavatra momba ny tantaran'ireo lava-bato ireo ianao. Voalaza fa fialofana izy ireo ary mety ho nampiasaina tamin'ny asa miafina na koa fomba fitsoahana. Amin'ny faritry ny Labyrint taloha misy hosodoko lava-bato. Ao amin'ny Labyrinth ara-tantara dia misy seho avy amin'ny tantaran'ny Budapest. Ao amin'ny lava-bato antsoina hoe Axis of the World dia misy teboka orientation hahafahana manao ny diany mamaky ireo lava-bato raha tsy misy mpitari-dalana. Indraindray azo atao ny manao fitsidihana amin'ny alina.
Ny distrikan'i Buda
Tsy ny lapa sy ny labirintany ihany no tanjon'ny mpitsidika ny tanàna. Ny distrikan'i Buda dia misy zavatra mahaliana vitsivitsy hafa. Ao amin'ny fiangonan'i San Matías Teo no satro-boninahitra ny mpanjaka any Hongria. Anisan'ireo harena nafenin'ity fiangonana ity ny ampingan'ny Mpanjaka Matías.
El Bastionan'ny mpanjono Io dia teboka iray hafa akaikin'ny trano mimanda ary fitsidihana tena ilaina ao an-tanàna. Any ambadiky ny fiangonan'i San Matías no misy azy ary eo akaiky eo dia misy tsenan'ny mpanarato, ary ny mpiambina ny mpanjono no miaro ity faritry ny tanàna ity, ka io anarana io no anarany. Ny teboka hafa azo jerena dia ny trano fivavahana jiosy tamin'ny taonjato faha-XNUMX na ny Tilikambon'i Maria Magdalena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ankafizo ny Buda Castle
Ny fandroana mafana ao Budapest